ရှေးမြန်မာ..: သမိုင်းထဲက လောကီပညာ ( ၅ )
သမိုင်းထဲက လောကီပညာ ( ၅ )
ဗဒုံမင်းနောက် နှစ်ပေါင်း ၄၀ အကြာ၊ မင်းတုန်းမင်း (၁၈၅၃-၁၈၇၈) လက်ထက်မှာ မန္တလေးနန်းတော်ကိုတည်ဆောက်တယ်။ ၁၈၅၇ ဩဂုတ်လ မြို့ကွက်ရိုက်ပြီးကတည်းက အစောင့်အရှောက် အရံအတားလည်းဖြစ်နန်းသက်လည်းရှည်အောင်ဆိုပြီး လောကီအစီအရင်တွေအစွမ်းကုန်သုံးပါတယ်။၂၀ ဧပြီ ၁၈၅၈မှာ မြို့တံခါးတွေမှာ အင်းမြှုပ်တယ်။ အင်းတွေရေးထားတဲ့ မြို့စောင့်နတ်ရုပ်တွေကိုစီရင်တယ်။ ၂၇ မတ် ၁၈၅၈ ခုနှစ်မှာ နတ်ရုပ်တွေကို လိပ်ပြာသွင်းတယ်။ နတ်ရုပ်တွေကို လိပ်ပြာသွင်းတယ်ဆိုတော့ လူစတေးတာကိုပြောသလားဆိုတာ သေချာမသိပါ။ ၁၅ မေ၁၈၅၉ မှာ မြို့ထောင့်တွေမှာ တစ်ရာ့တစ်ဆယ်ဝင် စည်အိုးကြီးတွေကို ဆီအပြည့်ထည့်ပြီးမြှုပ်တယ်။
၉။ အဋ္ဌဇေယျမင်္ဂလာအင်း ( ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၊ နယ်လှည့်ရာဇဝင် ၊ စာ ၂၆၈ မှကူးယူပါတယ်။ )
ဘယ်အင်းကို ဘယ်လိုစီရင်ပြီးဘယ်လိုအကွက်တွေချတယ်ဆိုတာ သေခြာမရှိလို့ မရှင်းပြနိုင်ပါ။ သို့သော် ၉ မေ ၁၆၃၅ ခုနှစ် ဘုရင့်အမိန့်တော်ပါ အချက်လက်တွေကို ကိုးကားပြီး အင်းချရာမှာလိုက်နာရမယ့် သံမဏိစည်းမျဉ်းတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောနိုင်သလောက်ကို ခန့်မှန်းပြီးပြောပါမယ်။
" အင်းဆိုသည်အရာသည် ကန်းခြင်းစွေခြင်းထောင့်ယွန်းခြင်းမရှိရ၊ သံကညစ်ဖြစ်စေ၊ နွားမွေးစုတ်ဖြစ်စေ၊ ကညစ်သွားစုတ်ဖျားချ၍ ရေးပြီးမှ မသင့်မကာသည်ဟူ၍ မြေဖြူနှင့် မပွတ်ချေစေနှင့် ၊ အင်းပြားဖြစ်စေ ၊ ပန်းပေါင်းအင်းဖြစ်စေ ၊ အင်းရေး ၁၊ ပညာရှိပုဏ္ဏား ၁၊ ပညာရှိအမတ် ၁၊ အင်းရေးသောအခါဘတ်၍ ဆိုမည့် အရိယာသံဃာ ၁၊ ကညစ်စုတ်သွားချမည်(ရှိ) သောအခါ အကြည့်အရှု ရဟန်းတော် ၁၊ ရေးသားပြီးလျှင် အက္ခရာသင်္ချာစစ်၍ တည်တိုက်ရမည် တပည့်ရဟန်းတော် ၁၊ အင်းတပြားလျှင် ခြောက်ယောက်၊ အင်းတကွတ်စေ့အောင်၊ ကြည့်ရှုကြပ်မပြင်ဆင်၍ ရေးစေရမည်။ ဆရာတော်တို့ကိုလည်း ပြန်လျှောက်ရမည် " လို့ပြောထားတယ်။
အင်းရေးတဲ့အခါ ကန်းခြင်းစွေခြင်းထောင့်ယွန်းခြင်းမရှိရ။ ကန်းခြင်း ( အင်းကန်းခြင်း ) ဆိုတာဘာကိုပြောမှန်းသေချာမသိပါ။ ကန်းခြင်းဆိုတဲ့အနက်ကို အလွယ်ပြောရရင် မအောင်မြင်တဲ့ အင်းကိုပြောတယ်ဘဲထင်ပါတယ်။ စွေခြင်း ( အင်းစွေခြင်း ) ဆိုတာကတော့ အင်းကွက်တွေချတဲ့အခါ မညီမညာဖြစ်တာကိုဆိုလိုဟန်တူတယ်။ " စွေတယ် " ဆိုတဲ့အသုံးဟာ မညီမညာ ဖြစ်တယ်၊ တိမ်းစောင်းတယ် ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သို့သော် အင်း ပညာရပ်မှာ အင်းစွေ ဆိုပြီး သီးသန့်အသုံးရှိရင်တော့ မပြောတတ်တော့ပါ။ ထောင့်ယွန်းခြင်း ဆိုတာတော့ ထောင့်မှန်မကျတာကို ဆိုလိုတာထင်တာဘဲ။ သေချာတော့အသိပါ။
အင်းရေးတဲ့အခါမှာ စာရေးကရိယာအဖြစ် သံကညစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ နွားမွေးစုတ် ဆိုတာက နွားမွေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ စုတ်တံကို ပြောတာထင်တယ်။ ကညစ်နဲ့ ရေးနေစဉ် တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ချွတ်ချော်သွားခဲ့သည်ရှိသော် မြေဖြူအသုံးပြုပြီး ပယ်ဖျက်ကြဟန်တူပါတယ်။ အလွယ်ပြောတော့ ခဲတံနဲ့ရေးထားတဲ့ စာ မှားတဲ့အခါ ခဲဖျက်သုံးပြီး ဖျက်တဲ့သဘောထင်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောတော့ အင်းရေးတဲ့အခါ အမှားအယွင်း အတိမ်း အစောင်းမရှိ သေသေသပ်သပ်ရေးရမယ် ၊ မတော်လို့ မှားသွားတဲ့အခါ နောက်တစ်ချပ်အသစ်ပြန်ရေးပါလို့ ဆိုတာပါဘဲ။
အထက်ပါအလုပ်တွေကို အင်းရေး ဆိုတဲ့အမှုထမ်းက သတိကြီးကြီးထားပြီးလုပ်ရပါတယ်။ ဘယ်နေရာအတွက် ဘယ်အင်းကိုသုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့ လောကီပညာရှင် ပုဏ္ဏား ဟူးရား တွေက ရွေးချယ်စီရင်ပါမယ်။ ပုဏ္ဏား ဟူးရား တွေက ရွေးချယ်စီရင်တဲ့ အင်းတွေ မှန်၊မမှန် သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ဆိုတာတွေကို ရှေးလောကီကျမ်းတွေနှင့်အညီ တိုက်ဆိုင်စီစစ်ဖို့ လောကီပညာရပ် နှံ့စပ်သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ပညာရှိအမတ်က စစ်ဆေးကြီးကြပ်ရတယ်။
အင်းရေးတဲ့အခါ ဒီအတိုင်းရေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သံဃာတော်တွေက ရွတ်ဖတ်သရဇယ်ပေးရဟန်တူတယ်။ အင်းရေးတဲ့အခါ ဘယ်နေရာ ဘယ်ထောင့်၊ ဘယ်အရပ်ကို မျက်နှာမူ ၊ အချိန်အခါနဲ့ နေရာတွေကိုသေချာ တွက်ချက်ရမှာမို့ အင်းစရေးတဲ့ အစပိုင်းဟာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ဟန်တူတယ်။ အဲဒီ အစ မှန်မှန် ကန်ကန်ရှိစေဖို့ လောကီပညာ အင်းရေးပညာနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးပါးက ကြီးကြပ်ပေးရဟန်တူပါတယ်။
ပြီးနောက်မှာတော့ အင်းရေးရာမှာ သုံးတဲ့ စကားလုံး ( စာလုံး ဝါကျ )၊ ဂဏန်း အပါအဝင် စီရင်တဲ့အင်းရဲ့ သဘောတရားနဲအညီတွက်ချက်ထားတဲ့ဟာ ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ကို စာပေပညာ လောကီပညာ အင်းရေးပညာနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးပါးက ကြီးကြပ်ပေးရပါတယ်။
အင်းတကွက်ကို လူခြောက်ယောက် ဝိုင်းရေးရတဲ့ အင်းအမျိုးစားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ရပြန်တယ်။ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အရာအားလုံးဟာ စီရင်တဲ့အင်းကိုလိုက်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘုရင်လုပ်သူဟာ ဒီလို လောကီပညာ အင်းစီရင်ရာမှာ သတိကြီးကြီးထားပြီးအလုပ်လုပ်ကြဖို့ တခုတ်တရ အမိန့်တော်ထုတ်ရသလဲဆိုတာ တစ်ခုစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ တကယ်လို့ နမော်နမဲ့ ပြီးလွယ်စီးလွယ်လုပ်ခဲ့သည်ရှိသော် ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲ။ သာလွန်မင်း လက်ထက် အမိန့်တော်တစ်ခုကို ကိုးကားပြီးဖြေရင်တော့ ရနိုင်ကောင်းပါတယ်။
ဒီလို ချွတ်ချော်မှုရှိနေတဲအင်းတွေကို မြို့ရိုး ပြအိုး တံခါးပေါက် အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုမိခဲ့သည်ရှိသော် ' ပြည်သူလူထု ရဟန်းရှင်လူကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အမှန်တော့ လောကီပညာအများစုဟာ ဘုရင်နန်းသက်ရှည်အောင် ဘုရင့်အချုပ်အခြာအာဏာ ရည်ရှည်တည်တံ့အောင်၊ ဘုရင်မှာ သိပ်ကောင်းတဲ့လောကီအစီရင်တွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ် ဒီတော့မင်းတို့ တော်လှန်ပုန်ကန်ဖို့ မကြိုးစားကြနဲ့ ဆိုတဲ့သဘောတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာတွေများပါတယ်။ ဒီတော့ ဘုရင့်အတွက်လုပ်တဲ့ လောကီအစီရင်မှာ ချွတ်ယွင်းချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်း ဘုရင်ကိုသာထိခိုက်ရုံသာရှိတော့မပေါ့။ ပြည်သူ့အကျိုးယုတ်တယ် ဆိုတာ နာမည်ကောင်းယူတဲ့သဘောသာ။
သာလွန်မင်းခေတ်မှာ ရာဇဝတ်မှု နှင့် တရားမမှု ဆိုပြီး အမှုအခင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ ရာဇဝတ်မှုဆိုတာကတော့ ဘုရင့်အာဏာကို မနာခံဖီဆန်တဲ့လူဟာ ရာဇဝတ်မှုမြောက်တော့တာပါဘဲ။ ချွတ်ချော်နေတဲ့ အင်းချ အင်းရေး အင်းမြှုပ် လုပ်တဲ့လူမှန်သမျှဟာလည်းဘဲ ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါတယ်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်တွေဟာ လောကီပညာကို သိပ်အလေးပေးတော့ ဒီလိုဘဲဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပညာရှင်တွေ မန္တလေးနန်းတော်တည်ဆောက်ရာမှာ ဘုရင်က " လူသတ်ပြီး စတေး " တဲ့ လောကီအစီရင်ကို သုံးတယ်လို့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောကြတယ်။ မြန်မာတွေဘက်မှာတော့ ပါးစပ်ပြော အရပ်ပြောရာဇဝင်တွေအဖြစ်သာ လူပြောများပြီး လူစတေးတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်း မတွေ့ရပါ။ ချားလ်စ် ဒူရွိုင်ဆယ်ရဲ့ မှတ်တမ်းစာ ( C.Duroiselle: Guide to the Mandalay Palace, Rangoon, Govt.Printing, 1925, pp.25-8) အရ ကျား၊မ ကြီးငယ် ငါးဆယ့်နှစ်ယောက် စတေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ပုံနှိပ်တိုက် တော်လှန်ရေးအစိုးရ ယဉ်ကျေးမှုဌာနအတွက် ပုံနှိပ်တဲ့ မန္တလေးနန်းတော် (Mandalay Palace) စာအုပ်မှာတော့ ခုလိုလူစတေးရာမှာ ကိုယ်ဝန်အရင့်မာ ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကိုအသုံးပြုရန်လိုလားတယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်။ လက်ဖတင်နင် ဂျင်နရယ်ဖိုက်ခ်ျရဲ့ " ယခင်နှင့် ယခုမြန်မာနိုင်ငံ " စာအုပ်မှာတော့ မြို့တစ်ခါး တစ်ဆယ့်နှစ်ရပ်မှာ လူတစ်ဆယ့်နှစ်ယောက် ဖမ်းပြီးကကြိုးချီဖိသတ်သည်ဆိုပြီး ရေးထားတယ်။ စုစုပေါင်းငါးဆယ့်နှစ်ယောက်။
ခုလိုလူသတ်ပြီးစတေးတဲ့ လောကီအစီရင်မျိုးအမှန်တကယ်ရှိ၊ မရှိ သေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဖို့ရာ တူးဖော်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။ လူအရိုး တွေရှာဖွေတွေ့ရှိပြီ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးရသည့်တိုင် မြန်မာတွေမှာသာ မဟုတ် ဥရောပတိုက်အချို့နေရာအပါဝင် အာရှတိုက်တစ်ခုလုံးနီးပါး ရှေးယခင်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့အလေ့ထဖြစ်တဲ့အတွက် မဖော်ပြဝံ့စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
Posted by ရှေးမြန်မာ at 8/08/2011
sawdoh August 11, 2011
Thayawaddy August 15, 2011
I would like to add some facts about oil pots at every corner of Mandalay city. Information about those oli pots were also read and noted in cities of Amarapura and Ava.
These oil pots were redigged every 10 years for reexamanation by king's astrologiers to predit whehter to move new city at new place or to remain in same old city.
I learnt that any changes of oil pots and conditions of oil inside were noted every 10 years.Changes like oil colour,reduce it's amount inside and positions of pots were indicators that need to move the existing city to another new location.
ရှေးမြန်မာ August 15, 2011
Thanks and appreciates for your information, it would be most appreciate that you could tell me which records or books that can refer to, if you can.
Thayawaddy August 16, 2011
Following lists of books were made references.
(1)Mandalay and Other Cities of Past in Burma.
by V.C Scott O'Connor published in 1907 by London Hutchison &Co.
(2)A Personal Narrative of two years imprisonment in Burmah by H.Gouger,
published in 1862 by London John Murray.
သမိုင်းထဲက လောကီပညာ (၆)
သမိုင်းထဲက လောကီပညာ ( ၄ )